मधेसी दलहरूको एकीकरणको अन्तर्य - विचार/विश्‍लेषण - कान्तिपुर समाचार
- तुलानारायण साह
यो एकीकरणले नेपाली राजनीतिको बृहत्तर पुनर्गठनको यात्रालाई अरू छिटो बनाउनेछ ।
वैशाख ८, २०७४-बिहीबारको बिहान धेरैका लागि अप्रत्यासित रह्यो । बिहानीको एफएम समाचारमा मधेसी दलहरूको एकीकरण केही दिनलाई टरेको समाचार सुन्नेहरू पत्रिका पढ्न नभ्याउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्को समाचार पढ्न पाएँ । छवटा मधेसी दलहरूबीच एकीकरण हुने त्यो समाचारले मधेसमा एकाएक नयाँ तरंग पैदा गरिदियो । वर्षौंदेखि सुन्दै आएको तर खासै पत्यार नलागेको यो एकीकरण किन र कसरी सम्भव भएको होला ? यसले नेपालको क्षेत्रीय र राष्ट्रिय राजनीतिलाई कसरी प्रभावित गर्ने हो ? प्रस्तुत लेख त्यसैमा केन्द्रित रहनेछ ।
गर्भपतनमा लैंगिक विभेद ›